ကျွန်ုပ်တို့သည် HTC Wildfire S (III) ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည် Androidsis
ဤစမ်းသပ်မှု၏တတိယနှင့်နောက်ဆုံးအပိုင်းသည် HTC အတွက်နည်းနည်းသာဖြစ်သည်။ ကြည့်ရအောင် terminal ကိုစွမ်းဆောင်ရည် သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။
ဖုန်း၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပြanyနာမျှကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ။ Android အတွင်းရှိ HTC Sense နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ဒီ terminal မှာရှိတယ်ဆိုတာသတိရပါ အန်းဒရွိုက် 2.3.3သူသယ်ဆောင်ခြင်းဝါကြွားလို့မရပါဘူးပါဝါပိုကြီးတဲ့အခြားဆိပ်ကမ်းများ။ Gingerbread နှင့်ဈေးကွက်ကိုထိုးနှက်သည့်အပြင်၎င်းမှာလည်းရှိသည် HTC Sense ၏ဗားရှင်း ၂.၁, ပွင့်လင်း, ကာတွန်းနောက်ခံပုံများနှင့်ရာသီဥတုဝစ်ဂျက်ကာတွန်းများနှင့်အတူ။
ဘက်ထရီကကျွန်မကိုအတော်လေးအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။ ဤဖုန်းတွင် 1320mAh ရှည်လျားစွာသွားနိုင်သည်။ 600MHz ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူဘက်ထရီသုံးစွဲမှုအလွန်နည်းသည်။ မျက်နှာပြင်ကအရမ်းနည်းလွန်းနေပြီးဘက်ထရီအလွန်အကျွံမသုံးပါ။ အလွန်မြင့်မားတဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်အတူကငါ့ကိုဖြစ်ပါတယ် ၂ ရက်ကြာဘက်ထရီသက်တမ်းမကုန်ဘဲကြာရှည်ခံသည်။
ငါတို့ရှေ့မှာဖုန်းကိုသတိထားရမယ်။ ငါ Angry Birds ကို install လုပ်ပြီးပြီ။ ဒီဂိမ်းနဲ့နောက်ကျမဆိုအမျိုးအစားကိုတင်ပြမထားဘူး။ ငါက Gameloft ဂိမ်းကို install လုပ်ဖို့မရဲရဲကြဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီနိမ့်ပရိုဆက်ဆာနဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် screen resolution ကမလုံလောက်လို့ပဲ။ ငါမကစားသမားများအတွက်အလွန်အကျွံအာရုံစိုက်မမြင်မိပါဘူး။ စျေးကွက်မှာမများလွန်းသောစျေးကွက်များ၌ကစားရန် (Angry Birds, Abduction, Fruit Ninja, Doodle Jump …) ကျွန်ုပ်တို့၌၎င်းတွင်ပြproblemနာများစွာရှိလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။
လုပ်ခြင်း အဆိုပါ Quadrant နှင့်အတူအခြေခံစံနှုန်း, များစွာသောကြိုးစားမှုနှင့်အတူကအမြဲတမ်းအလားတူရလဒ်များကိုပြန်လာ။ terminal ရှိရာအံ့အားသင့်စရာ။ graphical tests တွင် 6-10FPS ထက်မကျော်ပါ။ 690-700 တစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရရှိသွားတဲ့, ၎င်းသည် HTC Desire (သို့) Nexus One ကဲ့သို့သောသာလွန်ကောင်းမွန်သည့် hardware ဖြင့် terminal ကိုအထက်တွင်ထား၏ (Froyo သို့မဟုတ် Ginger မပါဘဲ version) HTC ဖြစ်ခြင်းကြောင့် bootloader ကိုပြုပြင်ပြီးချက်ပြုတ်ထားသော ROM များထဲသို့ဝင်နိုင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ဝေးသာလွန်ဖြစ်ဖို့သေချာသည်။
ဒီ terminal ကသူ့ရဲ့တိုင်းတာမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေပေးသလဲဆိုတော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်မှ Android ကိုအိမ်အိတ်ဆောင်အရွယ်အစား (အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ) တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် Nexus S (သို့) Desire HD ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းခွင်တွင်အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ Orange နှင့်အတူDelfín 59 (တစ်လလျှင်ယူရို ၂၀) ဖြင့်ခရီးဆောင်ရာတွင်ယူရို ၅၉ ဖြစ်သည်။; စျေးနှုန်းများမရှိသေးသော်လည်းမကြာမီ၎င်းကို Vodafone catalog တွင်ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက် terminal တစ်ခုပုံရသည် ရှိပြီးသားတောမီးလောင်မှုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ပါ. အပြင်ဘက်မှာအရောင်အရည်အသွေးနှင့်တောက်ပမှုအရအတော်လေးလျောက်ပတ်ပါတယ်။s ။ The ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်သာလွန်သည် ၂၄ နာရီကနေအားမသွင်းဘဲမူလ ROM နဲ့စမတ်ဖုန်းအတွက်။ နောက်ထပ်ဘာလဲ ဖုန်းမှာ Android 2.3.3 ရှိတယ်အများကြီးပိုမြင့်သောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူဆိပ်ကမ်းအများအပြားမြင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အားနည်းချက်တွေ၊ အမှန်တရားကမရှိဘူး။ ကျွန်တော်ပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်, ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ resolution သို့မဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့ကင်မရာကိုမပြောလိမ့်မယ် အကယ်၍ terminal သည်၎င်း၏တိုင်းတာမှုများကိုတိုးမြှင့်လိုပါက၎င်းသည်မတူညီသောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ Desire S. ကိုရှာလိမ့်မည်။ ကင်မရာကအရမ်းကောင်းတယ်, ၎င်းသည် 5MPx ရှိ Desire S နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ အဆိုပါချောအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် HTC မော်ဒယ်များနှင့်အညီဒီဇိုင်းသည်အလွန်သန့်စင်ပြီးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေများကိုဤ terminal ကိုအကြံပြုပေးပါမလား။ ဟုတ်တယ်ဖုန်းတစ်လုံးတည်းကိုသာရှာနေသူသို့မဟုတ်ဒုတိယဖုန်းတစ်လုံးတည်းအတွက်သာလျှင်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဘတ်ဂျက်အများစုကိုအဓိကတစ်ခုအတွက်ထားခဲ့ပါ။
ငါ terminal ကို၏စစ်ဆင်ရေး၏အချို့ရုပ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများထားခဲ့ပါ။
Angry Birds ကစားနေသည့်ဗီဒီယိုကိုစမ်းကြည့်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » ကျွန်ုပ်တို့သည် HTC Wildfire S (III) ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
«ငါ Angry Birds ကိုသွင်းထားပြီးပြီ။ ဒီဂိမ်းနဲ့နောက်ကျမည်သည့်အမျိုးအစားကိုတင်ပြမထားဘူး။ »
ငါ့မှာ Android 3.2 (Thanks Cyanogen) ပါသည့် HTC Tattoo ရှိပြီး Angry Birds သည်ငါ့အတွက်များစွာအကျိုးရှိသည်။
«ဤဆိုင်းဘုတ်ကိုကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုအကြံပြုလိုပါသလား။ ဟုတ်တယ်၊ ဖုန်းကိုပဲရှာနေသူအားလုံးအတွက်။
ကျွန်ုပ်၏ HTC Tattoo သည်အသက်ကြီး။ သေးငယ်သဖြင့်၎င်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
- အီးမေးလ်များကိုဖတ်ပါ၊ ဖြေပါ။ (ဇာတိလျှောက်လွှာ)
- တွစ်တာများကိုဖတ်ခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်းနှင့်ပြန်ကြားခြင်း (TweetCaster နှင့်အတူ)
ကျွန်ုပ်၏ feeds များကိုဖတ်ပါ (Feedly ဖြင့်)
- သတင်းကိုဖတ်ပါ (Pulse နှင့်အတူ)
- မှတ်စုများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ လင့်ခ်များစသဖြင့်သိမ်းပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Diigo အကောင့်သို့ (Power Note နှင့်)
- ကျွန်ုပ်ခရီးသွားသည့်အခါလမ်းကြောင်းလမ်းညွှန်အနေနှင့် (ဂူဂဲလ်မြေပုံများနှင့်အတူ)
- Angry Birds ကစားပါ
ဤအရာအားလုံးကို Wildfire ထက်ပိုပြီးသေးငယ်တဲ့ processor နဲ့ပိုပြီးသေးငယ်တဲ့ screen ပေါ်မှာ။ ဤအရာအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်ကြီးပြိုင်ပွဲနှင့် wauuuu ပရိုဆက်ဆာများထဲသို့ဝင်သင့်သည်ဟုမထင်ပါ။ terminal သေးသေးလေးကအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်။ ဒီဆောင်းပါးသုံးပုဒ်ထဲကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တာတွေကတောမီးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ Tattoo လေးကတ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တဲ့အခါငါ HTC ဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာသံသယဝင်တယ်။ တစ်နှစ်ကျော်လောက်မှာသုံးလတာ့တယ်လီဖုန်းမပါဘဲသုံးလပတ်လုံးဟာ့ဒ်ဝဲပြproblemsနာသုံးခုကြုံခဲ့ရတယ်။ ငါထင်ပုံကြီးချဲ့
မင်္ဂလာပါ၊ သင့်တွင်ဗားရှင်း ၃.၂ ပါဝင်သည့် tato ရှိသည်ဟုပြောပါသည်။ ငါ့မှာတစ်ခုရှိပေမယ့်ဗားရှင်း ၁.၆ ရှိတယ်။ ဒါကိုမွမ်းမံရန်သင်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာပြောပြနိုင်မလား။ ငါအများအပြားဖိုရမ်များတွင်ဖတ်ရှုကြပါပြီဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူးယခုသင်တန်းငါ whatsapp သုံးမရဘူး
ငါဘလော့ဂ်တော်တော်များများကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာHTCmaníaဖိုရမ်ကိုယုံကြည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဲဒါကငါ့အတွက်အရမ်းလွယ်ကူတယ်လို့ပြောပြီးအခုငါ Tatoo-Ginger နဲ့အရမ်းပျော်တယ် ;-D
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ tatoo ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါတယ်။ ငါ့မှာပြproblemနာတစ်ခုပဲရှိတယ်၊ အဲဒါကစျေးကွက်မပေါ်လာဘူး၊ အဲဒါကိုကြည့်ဖို့ငါဘာလုပ်ရမလဲသိလား
HTCManía၏တူညီသောဖိုရမ်များတွင် "Google Apps"၊ မြေပုံများ၊ gmail နှင့်အခြားသူများအကြားဈေးကွက်ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Javi စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်မဖြေဆိုနိုင်သေးပါ။
htc wildfire S မှာဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုရှိမရှိသိချင်ပါတယ်
မဟုတ်ပါ၊ ရှေ့ကင်မရာမပါသောကြောင့်ဗွီဒီယိုကို dodgy ခေါ်သည်
ဟိုင်းဆေးလ်ဗား။ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာရှေ့ကင်မရာမရှိတဲ့အတွက်မင်းမှာဗွီဒီယိုခေါ်စရာမလိုဘူး။ Jose ဆီကနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း
မဟုတ်ပါ၊ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုမရှိပါ ... သင်လိုချင်သောဆန္ဒကိုသွားရပါမည်
ကျွန်ုပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလကတည်းကတောမီး (ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏ပုံစံ) ရှိသည်။ ကျနော့်အမြင်ကတော့တောမီးမှာကျွန်တော်ရှိခဲ့တဲ့ဗားရှင်းဟာဒီသစ်တစ်ခုအတွက်ရေးဆွဲသလိုမျိုးမတူပါဘူး၊ Angry Birds ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနောက်ဆက်တွဲ (အချို့သောမူကွဲများအပြီး၊ တောင်မှမ) ထပ်ခါထပ်ခါကစားလို့မရပါဘူး Froyo (၂.၂.၁) နှင့်မည်သည့်လမ်းလျှောက်မှုရှိသည်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုမလိုကိုသိရှိပါ။ များစွာသောအရာအတွက်, ငါအနည်းငယ်ပိုပရိုဆက်ဆာကိုလွဲချော် (သို့မဟုတ်, ram, ငါမသိရသေး) အရာများစွာကိုအဘို့, အဲဒါကအဟောင်းကို pc ရွေ့လျား pc ကဲ့သို့ချိတ်ဆက်။
သို့သျောလညျး, ငါ Darzee နှင့်အတူလုံးဝသဘောတူ, ဒီဖုန်းကိုရှည်လျားသောလမ်းသွား။ သငျသညျ (သင်တစ်ချိန်တည်းမှာလေးလံ application နှစ်ခုရွေ့လျားသည်ဟုဟန်ဆောင်မဟုတ်အခြေခံအားဖြင့်) သင်ကချိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့သူကအလွန်ပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ပါသည်, သူကအရာအားလုံးကိုပြု: web ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, မေးလ်, chat, ဂိမ်းများ, ssh, gps (အလွန်ဘက်ထရီကုန်ခမ်း), pdf အလွန်ကောင်းသောကင်မရာနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုဝိုင်းရံထားသည့်အရာအားလုံးကိုလုံလောက်စွာအသုံးပြုခြင်း။ ၎င်းတွင်အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်အလွန်ပါဝင်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အစ်ကိုများထံသင်တောင်းနိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုကန့်သတ်ချက်များဖြင့်ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘက်ထရီကိုမခံစားဘဲ ၂ ရက်ထက် နည်း၍ သော်လည်းကောင်းသုံးခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်းသတိပြုမိသည်။ တော်တော်များများ (gps မှ လွဲ၍) သင်တစ်နေ့လုံးပြproblemsနာမရှိဘဲများများကြုံတွေ့ရသည်။
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုမေးတဲ့အခါငါကအကြံပေးတယ်၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာအဆက်မပြတ်မလုပ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုပုံမှန်အသုံးပြုဖို့နဲ့အသုံးချပရိုဂရမ်တွေသုံးတာကအရမ်းတော်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့လူတိုင်းဘာလို့ကြီးမားတဲ့ gadgets တွေကိုသူတို့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာဘာကြောင့်သယ်ဆောင်ချင်ရတာလဲဆိုတာကိုငါမသိဘူး။ သူတို့သာသူတို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်၊ ၎င်းသည်အုတ်မျိုးဆက်သို့ပြန်ကောင်းလာသည်။
convodaphone သည်ယူရို ၉၀ ခန့်ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး k နှုန်းသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချနိုင်ပြီး ၄၅ ယူရိုဖြင့်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ငါအကြံပြုသည်။ တစ်လ ၈ ယူရိုဖြစ်သည်။ ဤမိုဘိုင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ !!!!!!! !
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကောင်းသော2wildwire S (သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှု) ကိုကျွန်ုပ်ရနိုင်ပြီးသူတို့၏ terminal နှင့်ပတ်သက်သောစာမျက်နှာများကိုဖတ်ပြီးသောသူတို့၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကြားမှကောင်းမွန်စွာသွားနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
WhatsApp ကိုဤ HTC တွင်တပ်ဆင်နိုင်သလား။
ငါကမနေ့ကကတည်းကရှိခဲ့တာကောင်းတယ်။ ဘယ် application ကစုပ်ယူသလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီးဘက်ထရီကိုကြည့်ရတယ်။ WhatsApp သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ Skype သည်အလုပ်မလုပ်သော်လည်း Viber အလုပ်လုပ်သည်။ Angry Birds အရည် .. နှေးကွေးသော်လည်းအချို့သောစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည့်အတွက်ဈေးနှုန်းချိုသာသောဈေးနှုန်းအသစ်အတွက် (ယူရို ၅၉ ယူရို) အတွက်တောင်မှကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။
ငါကသူ့အရင်ကျော်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာကြည့်ပါ။ ကြိမ်နှုန်းတိုးလာသည်နှင့်အဆိုးဆုံးမှာ ARM v6 ပရိုဆက်ဆာအမျိုးအစား (Android အတွက် Firefox ကိုစမ်းသပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ Angry Birds အရာ၊ ဆလိုက်ရှိုး၊ ပြီးသောအရာတို့၌ယေဘုယျနှေးကွေးမှု) ဖြစ်သည်။
တိုတိုပြောရရင်စိတ်မရှည်တဲ့သူတိုင်းအတွက်အကြံမပြုတဲ့ကိရိယာတစ်ခု။ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ ကျနော့်ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့အမြင်မှာသူတို့ဟာသူ့ရဲ့အစ်ကိုဖြစ်တဲ့ Desire အဆင့်ကိုရောက်ဖို့မလိုဘဲအဲဒါကိုတကယ်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာပါ။
မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်များတောင်းရန်တယ်လီဖုန်းအိမ်၏စတိုးဆိုင်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်ရပ်နားလိုက်သည်။ (ကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်။ ဤအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်ကိုတက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်) သူတို့သည်တောမီးအားဆန့်ကျင်ရန်အကြံပေးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော့်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့စာရေးကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုအများဆုံးသွားတဲ့ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပင် Samsung Galaxy Ace သို့မဟုတ် Mini ကဲ့သို့သောအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှဆိပ်ကမ်းများအကြံပေးခဲ့သည်။
ငါတောမီး (သင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ) ကိုပဲလွှတ်လိုက်ပြီ။ ဖုန်းကိုမင်းရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှာရှုထောင့်တစ်ခုထည့်သွင်းချင်တယ်၊ ဘက်ထရီက ၁ ရက်ကြာတယ်၊ တခါတလေငါတစ်ခါတစ်လေတစ်ကြိမ်နှစ်ခါတောင်အားသွင်းရတယ်။ ငါမေးပြီးပြီ၊ ဒီပုံစံကလူတူတွေများတယ်။
ငါဖုန်းကိုမကြာခဏအခါအားလျော်စွာခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်စစ်ဆေးရန်အသုံးပြုသည်။ ငါ့မှာအက်ပလီကေးရှင်းတွေပိတ်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကဘက်ထရီကိုမသုံးတော့ဘူးဘာမှမစားဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဖုန်းကိုမကြိုက်ဘူး။
မင်းကပိုပြီးရည်မှန်းချက်ရှိသင့်တယ်၊ ပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းပြောမယ်၊ ဒီနည်းနဲ့ဒီဖုန်းကိုဝယ်ခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုအကဲဖြတ်နိုင်မယ်။
WhatsApp ကိုသွင်းလို့ရမလား ???
ငါ Jazztel နဲ့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်။ လစဉ်ယူရို ၁၁.၉၅ ပေးရတယ်၊ 11.95 Mb နဲ့မိုဘိုင်းက ၄၉ ယူရိုရှိတယ်။ ဆိပ်ကမ်းသည်ဇိမ်ခံနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား ?? ငါ ek htc wildfrie s ……
ဒါပေမယ့်ဖုန်းရဲ့အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်ကပြည့်နေတယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြတယ်။ ဒါကြောင့်ငါဓာတ်ပုံတွေ၊ သီချင်းတွေ၊ အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုကြည့်လို့မရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကနေရာလွတ်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်၊ ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်အရာအားလုံးသည်၎င်းကို sd ကဒ်ပေါ်တွင်မှမဟုတ်ဘဲဖုန်း၏မှတ်ဉာဏ်တွင်အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းပေးသည်၊ ၎င်းသည်အရာဝတ္ထုများကို SD ကဒ်သို့ပြောင်းရန်အခွင့်အလမ်းမပေးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။
ChiPi ElPilar ဟုသူကပြောသည်
ဆဲလ်ဖုန်း htc wildfrie s မှဖိုင်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ထပ်မံတပ်ဆင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သူမျက်နှာသို့ ၀ င်သောအခါသတိပေးပုံမပေါ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ထဲသို့ဝင်သောအခါကျွန်ုပ်ဘာမှမရရှိနိုင်ပါ။ ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုငါပယ်ဖျက်လိုက်တယ်၊ ငါကမျက်နှာမှတစ်ခုခုကိုပယ်ဖျက်လိုက်တာဖြစ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် prosesador ဖြစ်ခဲ့တာ၊ သူတို့က Facebook Chipi elpilar မှာနူးညံ့စေမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုကူညီပေးတယ်။
ChiPi ElPilar သို့စာပြန်ပါ
Sony Ericsson Xperia Play အတွက်သီးသန့်ဂိမ်းများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်